Iyi mitsara nemamiriro ("Mitemo", "Chibvumirano") chibvumirano pakati peWebhu Webhusaiti ("Webhusaiti Inoshanda", "isu", "isu" kana "vedu") newe ("Mushandisi", "iwe" kana "wako" "). Chibvumirano ichi chinotara zvese zvinoenderana nemashandisiro aunoita avalanches.com webhusaiti uye chero zvigadzirwa zvayo kana masevhisi (pamwechete, "Webhusaiti" kana "Services").
Maakaundi uye nhengo
Iwe unofanirwa kuve uine makore anokwana gumi nematatu ekushandisa iyi Webhusaiti. Nekushandisa iyi Webhusaiti uye nekubvumirana muchibvumirano ichi iwe waranti uye unomiririra kuti iwe unosvitsa makore gumi nematatu ekukura. Kana iwe ukagadzira account paWebhusaiti, iwe unozvidavirira kuchengetedza chengetedzo yeakaunti yako uye iwe unozvidira zvizere nezve zviitiko zvese zvinoitika pasi peakaundi uye chero zviito zvingaitwe zvine chekuita nazvo. Kupa ruzivo rwenhema rwemhando ipi neipi kunogona kukonzera kubviswa kweakaunti yako. Iwe unofanirwa kutizivisa pakarepo nezvese kushandiswa zvisiri pamutemo kweakaunti yako kana chero humwe hutongi hwekuchengetedza. Hatisi kuzobhadharwa chero zviito kana kusara nemwi, kusanganisira chero kukuvadzwa kwerudzi chero rwupi rwakaitika nekuda kwemabasa akadaro kana kusiyiwa. Tinogona kumisa, kuremadza, kana kudzima account yako (kana chero chikamu chayo) kana tikatadza kuona kuti watyora chero chibvumirano cheichi chibvumirano kana kuti maitiro ako kana zvemukati zvinogona kukanganisa mukurumbira wedu nekunaka kwedu. Kana tikadzima account yako nekuda kwezvikonzero zvambotangira, haugone kunyoresa zvakare kune edu maSevhisi. Tinogona kuvhara yako email kero uye Internet protocol kero kudzivirira kuwedzera kunyoresa.
Isu hatina yako chero data, ruzivo kana zvinhu ("Zviri mukati") zvaunotumira pane Webhusaiti mukati mekushandisa Service. Iwe unofanirwa kuve nemutoro wega pamusoro pekujeka, mhando, kutendeseka, kuvepa mhosva, kuvimbika, kuenderana, uye ruzivo rwekuchengeta zvinhu kana kodzero yekushandisa zvese zvakatumirwa Zviri mukati. Isu tinogona, asi hatina chisungo chekutarisa zviri muWebhusaiti zvakatumirwa kana kugadzirwa tichishandisa maSevhisi edu newe. Kunze kwekunge zvakatenderwa newe, kushandisa kwako Webhusaiti hakutipe rezinesi rekushandisa, kubereka, kugadzirisa, kushandura, kuburitsa kana kugovera Zvemukati zvakagadzirwa newe kana zvakachengetwa muakaunti yako yekushambadzira, kushambadzira kana chero chinangwa chakafanana. Asi iwe unotipa mvumo yekuwana, kukopa, kugovera, kuendesa, kuendesa, kugadzirisa, kuratidza uye kuita Zvemukati zvewebsite account yako seizvo zvinodiwa nechinangwa chekupa maSevhisi kwauri. Pasina kumisa chero cheanomiririra kana mawaranti, isu tine kodzero, kunyangwe isiri musungo, yekuti, mukufunga kwedu tega, tirambe kana kubvisa chero Chinyorwa icho, mumaonero edu anonzwisisika, chinotyora chero mimwe mitemo yedu kana mune chero nzira inokuvadza. kana kuramba.
Isu hatisi mhaka yeZvinyorwa zvinogara pane Webhusaiti. Hapana chiitiko chichaitwa isu tine mhosva yekurasikirwa nechero chinhu. Iro ibasa rako rega kuchengetedza chakakodzera chengetedzo yezvinhu zvako Zvemukati. Pasinei nezvakafanotaurwa, pane dzimwe nguva uye mune mamwe mamiriro ezvinhu, pasina chisungo chakakwana, tinogona kukwanisa kudzoreredza kana yako data rese rakabviswa seyimwe nguva uye nguva iyo yatingave takachengeta dhata nezvekwedu. zvinangwa. Isu hatipe vimbiso yekuti data raunoda raizovepo.
Isu tine kodzero yekushandura Chibvumirano ichi kana zvibodzwa zvaro zvine chekuita neWebhusaiti kana masevhisi chero nguva, zvakanyatsoenderana nekutumira kweshanduro yakagadziridzwa yeichi Chibvumirano pawebhusaiti. Kana tadaro, isu tichaisa chiziviso pane chikuru peji rewebhu Webhusaiti. Kuenderera mberi kwekushandiswa kwewebsite mushure mekuchinja kwakadaro kunenge kubvumidza kwako kuchinja kwakadaro.
Kugamuchirwa kwematemu aya
Iwe unobvuma kuti iwe wakaverenga ichi chibvumirano uye unobvuma kune ese ayo mazwi uye mamiriro. Nekushandisa iyo Webhusaiti kana masevhisi ayo unobvuma kusungwa neiyi Chibvumirano. Kana iwe usiri kubvuma kutevedzera zvinoenderana nechibvumirano ichi, hauna kupihwa mvumo yekushandisa kana kuwana iyo Webhusaiti neMasevhisi ayo.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve Ichi chibvumirano, tapota taura nesu.
Gwaro iri rakapedziswa kugadziriswa musi waApril 12, 2019